Kuputsika kweiyo iPhone X kunotishamisa nebhatiri repiri mukati | IPhone nhau
Kuputsika kweiyo iPhone X kunotishamisa nebhatiri repiri mukati
Mune ino kesi kwave kusiri iko kuputswa kwepamutemo kunoitwa neIFixit, asi ichiri kuratidza. Sezvazvakaita nemidziyo mitsva yeApple, tinotarisira kuti ichasvika zviri pamutemo pamaoko eIfixit kukuunzira kuparara kuzere uye pamusoro peyese kuongororwa kwayo maererano nekugona kugadzirisa kwatinofanira kuita pane iyo iPhone X, asi iyo isati yasvika isu tine iyo Yakaputika maonero emushandisi iyo inotiratidza iyo yakakura yemukati tsananguro yeiyi nyowani iPhone modhi, bhatiri rayo kaviri kana L bhatiri.
Icho pasina mubvunzo chimwe chezvakanyanya kukosha uye zvakasarudzika zvemukati zvinyorwa mune iyi nyowani iPhone X, kubvira Iko hakuna imwe iPhone munyika iyo mabhatiri maviri akawedzerwa mukati. Idzi inhau dzakakosha dzinoshamisika munhu wese.
Iyi ndiyo yakaputika vhidhiyo iyo inotora ingangoita maminetsi gumi nemashanu uye maunogona kuona mukati meiyi smartphone nebhatiri rakapetwa se «kushamisika chinhu»
Vatengi vekutanga veiyo nyowani iPhone X vari kutonakidzwa nechiratidziro chayo chihombe, Chiso ID uye kunyangwe kuburitsa induction, asi bhatiri rechipiri zvirokwazvo chikamu chakakosha uye chakasarudzika chehardware chavakawana muvhidhiyo iyi. Zvinoramba zvichionekwa kana iyi nzira nyowani yekugadzira mbiri-bhatiri iPhones iri kuramba ichiitwa mune mamwe maPhones anosvika pamusika, asi isu tiri pachena kuti sarudzo haina kushata tichifunga izvozvo Iyi iPhone X ine kuzvitonga kwakakwirira kupfuura iyo iPhone 8 nguva dzose mumashoko eApple pachayo.
Tsanangura kuti kunwiwa kweOLED skrini kunoda mAh yakawanda kuti ikwanise kumira mukushanda uye pasina kupokana bhatiri rakapetwa rinogona kunge riri mhinduro yedambudziko. Mune ino kesi ivo havana kuita bhatiri muchimiro chematanda sezvavakaita neiyo 12-inch MacBook, asi mhinduro yakafanana zvakaenzana kunyangwe nzvimbo yavanogara mukati meiyo iPhone X.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone X » Kuputsika kweiyo iPhone X kunotishamisa nebhatiri repiri mukati
Vanoba 300 iPhone X pavaienda kunounzwa muApple Chitoro
Iyo iPhone X yanga yakarongerwa kurova musika mu2018